Ra,iisal wasaare Khayre oo ka hadlay sababta loo magacaabi la’yahay Taliyeyaasha NISA iyo Booliska | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ra,iisal wasaare Khayre oo ka hadlay sababta loo magacaabi la’yahay Taliyeyaasha NISA...
Ra,iisal wasaare Khayre oo ka hadlay sababta loo magacaabi la’yahay Taliyeyaasha NISA iyo Booliska
Iyadoo wali aanan la magacaabin Taliyeyaasha Nabad Suggida iyo Booliska Soomaaliya, ayaa arintaasi waxaa ka hadlay Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre.
Hawsha ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska, ayaa waxaa sii wada Taliye Ku xigeenada ciidamada Booliska Iyo NISA, waxaana jirta in weli aanan si rasmi ah loo magacaabin masuuliyiintii xilalkaasi qaban laheyd.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlay arintan, ayaa wuxuu sheegay muhiimada inaysan aheyn magacaabista Taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida, balse muhiimada ay tahay socoshada shaqada ciidanka.
“Muhiimada ma’ahan in Taliye la magacaabo, muhiimada waxa ay tahay Boolis noocee ah ayaan u baahanahay, Nabad Suggida noocee ah ayan rabnaa, ciidamada NISA ee shaqeeya Saldhig noocee ah ayeey yeelan doonaan, waxaa muhiim ah in aan marka hore eegno aas-aaska, waxaa jooga dad ku simayaal ah oo shaqo fiican haayaa, oo aan aaminsanahay iyaga laftooda dalkaan wax u soo qabteen, dhameystirkoodana wuu imaanaya, sidoo kale ma’ahan in la iska ilaaway jagadaas banaan.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa sheegay masuuliyiinta xilalka dowladda loo dhiibaayo in lagu xulanaayo inay la jaanqaadi karaan siyaasadda dowladda ee xilligaan ay ku shaqeynayso.
Wuxuu sheegay Xasan Cali Khayre, muhiim inay tahay masuuliyadda qaran ee dalka in dusha loo saaro qof ka soo bixi karo, marka la eego marxaladda dalka ee horay u socodka ah ee xilligaan lagu guda jiro.